घुमघामका अप्ठेरा घुम्ती – देशदृष्टि
Posted bymilanbagale November 8, 2020 Posted inUncategorized
नेपालले सन् २०२० लाई घुमघाम वर्ष (पर्यटन वर्ष) का रुपमा मनाउने रहर गरेको थियो र त्यसै अनुरुपका कार्यक्रमहरु बनाएको थियो । कोभिड–१९ विश्व भ्रमणमा निस्किएसँगै यो कार्यक्रमा ब्रेक लाग्यो । घुम्नु परको कुरा, घरबाहिर निस्कनसमेत डराउनुपर्ने अवस्था आयो । अहिले त नागरिक डर प्रतिरोधी भइसकेका छन् । डराएर होइन, सचेत भएर तथा सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर जीवनको रथ गुडाउने चेत पलाएको छ । दैनिक जीवनयापनबाहेक दशैंको मेसोमा पर्यटकीय गतिविधि पनि केही चलमलाएको देखियो । प्याराग्लाइडिङको सहायताले हावामा कावा खाँदै रमाइरहेका नागरिकका तस्वीर र भिडियोले सामाजिक संजाल रंगीएका छन् । ठाउँ—ठाउँबाट सुन्दर हिमालका तस्वीर निरन्तररुपमा छाइरहेका छन् । राजधानीका आसपासका पर्यटकीय गन्तव्यसँगै पोखरा, सौराहालगायतका चल्तीका ठाउँमा दशैंको मेसोमा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल देखियो । त्यो चहलपहलले पर्यटन व्यवसायीलाई थोरै भएपनि राहत दिएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीले ल्याएको आँधी छिट्टै थामिएलाजस्तो छैन । ढिलोचाँडो आँधी थामिएपछि विदेशी पर्यटक फेरि नेपाल भित्रनेछन् भन्ने आशा गरौं । प्रकृतिले अनन्त सिंगारेको यो देश साहसिक पर्यटनका लागि संसारभर चर्चित पनि छ । अक्करे भीर, डरलाग्दा हिमाल र डरलाग्दा नदी साहसिक पर्यटनका रहरलाग्दा गन्तव्य बनिरहेका छन् । हिँड्न, डाँडाकाँडा चढ्नका लागि पनि बाह्य पर्यटक नेपालका विभिन्न ठाउँ पुग्छन् ।
नेपाली पर्यटक पनि गरुंगा झोला बोकेर, क्यामेरा भिरेर डाँडापाखा डुल्न अभ्यस्त भइसकेका छन् । स्वदेशीलाई पर्यटक नै नमान्ने चालचलन फेरिदो क्रममा छ । डाँडाकाँडा घुम्दा सञ्चो र आनन्द महसुस गर्नेहरु बढिरहेका छन् । यो आन्तरिक पर्यटनका लागि सुखद् पक्ष हो । तर पर्यटकलाई घुमाउने नाममा नेपाललाई सधैं अक्करे भीरको देश र गाउँका नागरिकलाई ‘भीरमौरी’ बनाउनु चाहिँ हुँदैन । अर्थात, विकासका नाममा जथाभावी डोजर जोत्नु गलत परिपाटी हो । पर्यटन र विकासको लय नमिल्दा देश न त गरिखान सहज बनेको छ न त घुमिसक्नु नै बनेको छ । साहसीक पर्यटनका लागि चल्तीका पदमार्गलाई जोगाएरै तथा प्रकृतिलाई दोहन नगरी स्थानीय नागरिकको दैनिक जीवनयापनका लागि सहज राजमार्ग, जलमार्ग र केबुलकारहरु बन्न सके देशको कथा अर्कै हुन्थ्यो । तर त्यसो भइरहेको छैन । केबुलकार तीर्थाटनमै सीमित छ । जलमार्ग एकाध रामरमितामै सीमित छ । नक्शांकन नगरी जथाभावी जोतेरै देश बनाउन खोज्दा जता गएपनि डाँडापाँखा छियाछिया देखिन्छन् । न हिँडिसक्नु, न गुडिसक्नु न उडिसक्नु । डाडाँपाखाको देश भएकाले देशभर घुम्तीहरु छन् । भूगोलले बटारेकोमा चित्त दुखाई छैन । तर सेवा, सुविधाको लय नमिलेकाले ती घुम्तीहरु मन बहलाउने खालका छैनन् ।
दूरदराजका कष्टकर तर रोमाञ्चक गन्तव्यबाहेक सानाठूला शहर छेउछाउँका सुन्दर र आकर्षक गन्तव्य पनि नेपालमा धेरै छन् । हेलिकप्टर चढेर सगरमाथाको फेदमा ब्रेकफास्ट खानेदेखि कलाकौशलले भरिएको द्धारिकाज रिसोर्टमा बास बस्ने सुविधा छ भनेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्चा भएपनि त्यतिले मात्र मख्ख परेर भएन । हेलिकप्टर चढ्ने, महंगा पर्यटकीय गाडी तथा निजी गाडी चढ्ने पर्यटकलाई त नेपाल रमाइलै होला । तर, सार्वजनिक सवारी प्रयोगकर्ताका लागि पनि त नेपाल घुम्नलायक देश बन्नुपर्यो । सानाठूला शहर छेउछाउँका असाध्यै चलनचल्तीका गन्तव्यहरु सहज सार्वजनिक सवारी साधनको अभावमा कसरी ‘साहसीक’ भन्न मिल्ने गरी अप्ठेरा गन्तव्यहरु बनिरहेछन्, त्यसैबारे चर्चा गर्दैछु ।
काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरलगायतका चल्तीका नेपाली शहरहरु फराकिला उपत्यकामा फिजिएका छन् । वरिपरि सुन्दर डाँडापाखा, ताल तलैया र नदी भएपनि यी सहर सफा, सुन्दर र मनमोहक बन्न सकेका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकाको कलाकौशल, पोखराका तालतलैया र भरतपुरको हरियोपरियो विस्तारै खुइलिँदै जान थालेको छ । नेपालका सबै शहरहरु अव्यवस्थित तरिकाले ससाना प्लटमा घरले भरिने र अरु सार्वजनिक सम्पत्तिहरु मासिने समस्याले ग्रस्त छन् । शहर थकान उत्पादन केन्द्रजस्तो बनेकाले होला, थाकेका शहरवासी वरिपरीका डाँडाकाँडा पुगेर मन बहलाउने रहर गर्छन् । रैथाने शहरवासीबाहेक टाढा–टाढाबाट ती शहरमा आएका पर्यटकपनि डाँडाछेउँका गन्तव्यमा जान रुचाउँछन् ।
डाँडामा पुगेपछि दृष्टि बेस्सरी फिजारिन्छ । एकैपटक परसम्म देखिन्छ । प्रकृतिको नजिक पुगेको महसुस हुन्छ । हल्लाखल्लाले थर्किएको कान, प्रदुषणले थाकेको आँखाले शान्ति महसुस गर्छन् । त्यसैले ठूला शहर नजिकैका सुन्दर डाँडाकाँडाहरु चल्तीका पर्यटकीय गन्तव्य बनेका छन् । गन्तव्य बनेपनि डाँडाको विकास प्रकृतिमैत्री र रैथाने वास्तुकलामैत्री बन्न सकेको छैन । पर्यटक पुग्ने सबै ठाउँलाई ठमेल बन्ने रहर छ । त्यसैले त मनकामना सेरोफेरोको वस्ती होस् या नगरकोट, ती बस्तीहरुमा आफ्नोपन पटक्कै भेटिदैन । पानी कसरी जोगाउने, हरियोपरियो कसरी जोगाउने, फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्ने, वस्तीलाई कसरी मौलिक डिजाइनयुक्त बनाउने भन्नेतिर चिन्ता, चासो र चिन्तन देखिएको छैन । बडाबडा होर्डिङबोर्ड, काला तारको गुजुल्टो र अग्ला घरले डाँडाकाँडाको सौन्दर्य खस्किरहेको छ । सकेसम्म अग्लो भवन बनाउने र बढी पैसा कमाउने होडमा डाँडाकाँडाको गन्तव्य रमाइरहेको छ ।
प्रकृतिले मुठी फुकाएर दिएकाले ठूला शहर वरिपरिका सुन्दर डाँडाकाँडा पर्यटकीय आर्कषणको गन्तव्य त बने तर गन्तव्य बनेरमात्र भएन । पुग्नलाई सजिलो र सुरक्षित बाटो चाहियो । त्यो बाटोमा पर्यटकमैत्री सार्वजनिक सवारी साधन चाहियो । सँगसँगै एकाध घण्टामै हिँडेर पुगिने ठाउँमा सहज र सुरक्षित पैदलमार्ग पनि भए धेरै राम्रो । सम्मानजनक व्यवहार गर्ने कर्मचारी भएका सफा र सुविधाजनक सार्वजनिक सवारी साधन भैदिए ती गन्तव्यमा पुग्ने पर्यटक कति खुसी हुन्थे होलान् । त्यहाँ जानेको संख्या अझ कति बढ्थ्यो होला । ४ महिना व्यापार गरेर ८ महिना सुनसान हुने गन्तव्यमा बाह्रै महिना चहलपहल र व्यापार हुन्थ्यो होला । तर नेपालका अधिकांश गन्तव्य सहज सार्वजनिक सवारी साधनबाट जोडिन सकेका छैनन् ।
डाँडाकाँडाको के कुरा, भक्तपुरजस्तो उत्कृष्ट र सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्य पर्यटकमैत्री सार्वजनिक सवारीसँग जोडिएको छैन । बाटो जति फराकिलो भएपनि उही कोचाकोच, घच्चमच्च र ढिलासुस्ती यात्रा उहिल्यैदेखि चलिरहेको छ । कार र मोटरसाइकल गुडेरमात्रै हुँदैन । पर्यटकीय गन्तव्य सहज र शुलभ सार्वजनिक सवारीबाट पनि जोडिनुपर्छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले शहर क्षेत्रमा नगर बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोहलपुरदेखि रुपैडिया बोर्डरसम्म सहज यात्राको व्यवस्था मिलाएको छ । घाँटीमा परिचयपत्र भिरेका र सबैसँग शिष्ट व्यवहार गर्ने महिला सहचालक देखेर बस चढ्नेले गर्व महसुस गर्छन् । यी एकाध उदाहरणबाहेक पर्यटकसँग पाइला पाइलामा पैसा असुल्ने नेपालका अधिकांश स्थानीय सरकारले सहज र शुलभ नगर यातायात सुरु गर्ने रहर गरेका छैनन् । यसो हुन सके पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटक र स्थानीयवासी सबैले सुविधा पाउँथे । ती गन्तव्यको पर्यटकीय गतिविधि झन् फस्टाउँथ्यो ।
पर्यटकलाई सजिलोसँग जोड्न नजानेका गन्तव्य नेपालमा धेरै छन् । सानाठूला शहर नजिकका केही असाध्यै चल्तीका गन्तव्यको चर्चा गरौं । काठमाडौंबाट नगरकोट र ककनी नजिकै छ । केबुलकारबाट जोडिएको असाध्यै सुन्दर गन्तव्य कालिञ्चोक पनि दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटबाट धेरै पर छैन । तनहुँको डुम्रेबाट बन्दीपुर र पोखराबाट सराङकोट पनि नजिकै छन् । यी डाँडाहरु सुन्दर छन् । हावापानी राम्रो छ । पर्यटकको ओइरो उहिल्यैदेखि तानिएकै छ । तर यी ठाउँमा नजिकको सहरबाट सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गरेर पर्यटक सजिलै पुग्छन् त ? पुग्दैनन् । सहरबाट अत्यन्त नजिकका यी गन्तव्यमा पुग्न सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्ने पर्यटकले अनेक सास्ती भोग्न बाध्य हुन्छन् । बेकारमा डाँडा चढ्ने रहर गरिएछजस्तो महसुस हुन्छ । मोटरसाइकल, ट्याक्सी र कार/जीप चढ्नेले आनन्द नै मानेका होलान् । मोटरसाइकल र स्कोरपियो जिपको लर्को त यी गन्तव्यमा लामै देखिन्थ्यो कोभिड कालअघि । तर सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने पर्यटकलाई यी गन्तव्यले धेरै सकस दिन्छ ।
काठमाडौंबाट नगरकोट धेरै टाढा छैन । पर्यटकीय सुविधाका होटलको पनि दुःख छैन । तर त्यहाँ पुग्न पटक्कै सजिलो छैन । रत्नपार्कबाट सिधै नगरकोट जाने बस नै छैन । नगरकोट पुग्न पहिला रत्नपार्कबाट भक्तपुरको कमलविनायक पुग्ने बस चढ्नुपर्यो । कमलविनायक पुगेपछि नगरकोट जाने बस खोज्नुपर्यो । साह्रै सास्ती दिनेगरी कोचाकोच गरेर यात्रु भरेपछि बल्ल नगरकोटका बस ढलढल ढलपल गर्दै गुड्छन् । नगरकोट जाने बसपार्क देख्दा र बसमा छिर्दा नै बेकारमा जान लागेछुजस्तो भान हुन्छ । केही वर्षदेखि बनाउने नाममा बाटो अलपत्र पारेर नगरकोट गइनसक्नु बनेको छ । असाध्यै धूलाम्य यो बाटो ढिलोचाडो बन्ला तर बाटो बनेपनि बसको हालत त उही हो । पर्यटकलाई बसका सहचालक र चालकले गर्ने हप्कीदप्की व्यवहार त उही हो । रत्नपार्कबाटै राम्रा, सजिला, सफा र सुविधाजनक बस चलाए, त्यस्ता बसमा राम्रो आनीबानीको तालिम पाएका चालक र सहचालक राखे नगरकोट जान कति हौसिदा हुन्, स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक । तर त्यस्तो हुनेवाला छैन । पर्यटकलाई दुःख दिएरै पर्यटन विकासको हल्ला गर्न सबैलाई सजिलो छ । पर्यटकलाई सताएरै यो देशको पर्यटन उद्योग चलिरहेको छ । नगरकोटमा पर्यटकलाई सेवासुविधा त कता हो कता, सार्क राष्ट्र बाहेकका पर्यटकसँग प्रतिब्यक्ति ३ सय ५० रुपैयाँ र सार्क राष्ट्रका पर्यटकसँग (नेपालीलाई होइन) २ सय ५० रुपैयाँ असुल्न थालिएको छ ।
नगरकोटको जस्तै हालत छ तनहुँ र पोखरामा । पोखरा पुग्नुअघिको सुन्दर र चल्तीको गन्तव्य हो बन्दिपुर । तनहुँको डुम्रे बजार पुगेका पर्यटक बन्दीपुर पुग्नुअघि नै हत्तु भइसकेका हुन्छन् । डुम्रे बजारमा थोत्रा बसको घण्टौंसम्मको पर्खाइ र कोचाकोच यात्राले अत्यास लाग्छ । न सजिलै पुगिन्छ, न सजिलै फर्कन पाइन्छ । ठूलो स्वागत गेटभित्र छिर्दा मख्ख परेका पर्यटक फर्कदा नमिठो अनुभूति लिएर फर्कन्छन् । यातायातको उचित प्रबन्ध नहुँदा अरु राम्रा कुरा पर्यटकले भसक्कै बिर्सन्छन् । यो तथ्य आत्मसात गर्नुपर्छ । पोखराको सराङकोट पुग्नेको हालत पनि उस्तै छ । पोखराको बाग्लुङ बसपार्कमा कोचाकोच भएर भरिएपछि बल्ल बस उकालो लाग्छन् । मुस्किलले एउटा बस अट्ने साँघुरो बाटो, गाडीचाहिँ दोहोरो गुड्न खोजेपछि जामले थलिन्छ यात्रा । सराङकोट पुग्दा नै मन थाकिसकेको हुन्छ । थाकेको मनले नियालेको दृश्य त धमिलो पो हुने रहेछ । २०७६ सालको दशैंताका त्यसरी नै हत्तु भएर सराङकोट पुग्दा मेरो पनि मन गह्रौँ भएको थियो । सार्वजनिक सवारी साधनमा चढेर अलिकति उकालो उक्लिएपछि देखिँदो रहेछ पोखराको पर्यटनको हविगत ।
अत्यन्त चल्तीका र शहर वा राष्ट्रिय राजमार्ग नजिकैका नगरकोट, ककनी, बन्दीपुर, सराङकोट, कालिञ्चोक केही प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै हुन् । देशको पर्यटनको सिंगो चित्र यस्तै छ । पोखराबाट लुम्बिनी जाने पर्यटकले सजिलोसँग यात्रा गर्न पाउँदैनन् । पर्यटकीय सुविधाका एकाध बसहरु त छन्, डिलक्स नाम जोडिएका । तर तिनले अत्यन्त कमसल होटलमा अस्वस्थकर खाना महंगोमा खान बाध्य बनाउँछन् । पोखराबाट लुम्बिनी राम्रोसँग जोडिएको होला भन्ने मेरो अनुमान थियो । तर त्यसो होइन रहेछ । कालोपत्रे सडकले जोडिएपनि यात्राको अनुभव भने अलपत्रे नै रह्यो ।
पर्यटक हुन् या आम सर्वसाधारण, सबैले पैसा तिरेवापत सेवा पाउनुपर्छ । सजिलो सडक, सफा होटल र सहज सार्वजनिक सवारी साधन र ब्यक्तिगत सुरक्षा पर्यटकीय विकासको पूर्वशर्त हो । बाटो राम्रो बनाएर मात्र भएन । सहज यात्रा गर्न पाइएन भने बाँकी सबै कुरा फिक्का बन्छन् । केही सोधे कसैले हप्काउला कि ? केही किने कसैले ठग्ला कि ? केही खाए थला परिएला कि ? कसैले लुट्ला कि ? यस्तो त्रास बोकेर गरिने यात्राले के रमाइलो देला ?
प्रकृतिले दिएको अद्भूत सौन्दर्यले तानिएर स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक नेपालका कुनाकाप्चा डुलिरहेका छन् । तर डुलेर फर्कदा अनेकखाले सास्तीको चित्रले हिमाल र पहाडको चित्र नै धमिलो बन्छ । हिमाल, पहाड होस् या तराई जतासुकै सास्तीको साम्राज्य चलिरहेको छ । सजिलै पुग्छु, सजिलोसँग बस्छु र सजिलोसँग हलुको मनले फर्कन्छु भन्न सकिने गन्तव्य ठूला सहरभन्दा पर कता छ खै ? अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, राष्ट्रिय राजमार्गमा चल्ने डिलक्स बस, तारे होटलको चर्चा चुलिएकै छ । तर छोटो दूरीमा सहज सार्वजनिक साधनको ब्यवस्था मिलाउन स्थानीय सरकारको ध्यान पुगेको छैन । सहज सार्वजनिक सवारीले पर्यटकीय गन्तव्य जोड्न जानेको दिन स्थानीय सरकार, यातायात व्यवसायी र पर्यटन व्यवसायीको जय होस् ।
(२०७७ साल कार्तिक १८ गते मंगलबार इन्जिनियर्स पोष्ट डटकममा प्रकाशित)
होम आइसोलेशन, बसोबास शैली र हाम्रा घरबस्ती….
One thought on “घुमघामका अप्ठेरा घुम्ती”
honee, ye ramra gantbya ma jaan ko lagi staniya sarkar le rarmora surchhit sadhan haru ra saathai roller coaster jesto ma chdheko anubhuti hune baatoharu surchh thit saathi ramra dhekheene yaatayat gradha ka sadhanharu sathai baato kopanee marrmat hunu parchh hai, yes ma mero purn sah mate chh, sathai danger ghuti haru ma slow aadhi suchan chtra haru thau thauma ma rakhe , sabai ko yatra save ra joyful hune theeyo.